Xaaladaha Legal – "Eximio" Accounting Expert
Avenue Sao Paulo, hall 3 - Vila Brasilia, Aparecida de kala xulka - Goias, 74905-770
Siyaasadda iyo Xaaladaha Legal
Xaaladaha LegalOdenir Campos2019-02-18T10:00:24+00:00
xal Our ganacsiga la xiriira yar, Shirkadaha dhexdhexaad ah oo waaweyn Brazil oo dhan, fidinayo adeeg this macaamiisha International in ay leeyihiin hawlaha ee Brazil. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo nafteena, kuwaas oo macaamiisha ka baxsan Brazil, sidaas darteed waxaan yeelatay portal isku dhafan in English www.accountingexpert.com.br in uu leeyahay turjumaadaha luqado kale oo dhowr ah oo ku saabsan shuqullada luqadda browser aad. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa luqadda aad jeceshahay on hoose ee bogga. In the case of helitaanka ee Brazil waxaan ku talinaynaa helaan galay portal Portuguese: www.eximiocontabil.com.br si toos ah.
Xisaabaadka waxaa looga baahan yahay sharci ahaan inay ku wargeliyaan macaamiishooda siyaasadaha ay ku saabsan asturnaanta macluumaadka macaamilka. dhaqanka noocan oo kale ah waxaa loo yaqaan Professional go`nayd by Board of Accounting in Brazil iyo in la raaco. Systems Our xisaabaadka leedahay khibradda loo ilaaliyo Qarsoodiga iyo Security of Information Client hadda iyo hore ee si ay u ilaaliyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed aan shaaca laga qaadin, ee aanu hayno jirka, elektarooniga ah, iyo dhowritaanka nidaameed ee waafaqsan heerarka xirfadle ee our. Sababo la kuwan siyaasadaha aan aan awood u leeyihiin inay ku siiso nuqullada waraaqaha kasta oo kuwa baangiga jooga iyo qaybaha kale ee saddexaad ee u baahan kartaa macluumaad adiga oo aan oggolaansho qoraal ah.
Macmiilku waxa uu leeyahay in laga war hayo oo ka mid ah shuruudaha sharci iyo siyaasadeed ee Exímio ah, qoysnimadooda ay akhriska iyo sidoo kale ka kooban oo ka mid ah Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo (FAQs) in ka kooban content ee web site this.
Deymaha ku xiran tahay adeegyada qandaraas si macmiil kasta uu leeyahay baahiyaha kala duwan. Xisaabaadka laga yaabaa in aanay masuul ka ah maamulka ganacsiga saboolka ah ee macmiilka noqon, inkasta oo ay tahay in ay hanuuniyo macaamiishooda had iyo qoraal marka baryo ama degna marka xirfadle ah ka warqaba isbedel la taaban karo ay tahay in la qiyaasi. Our koox inta badan waxaa ka mid ah lagu burburin karo liability kooban heshiiska adeegyada si ay isu dahaar ka magdhow heshiis iman kara in kac ka jebinta heshiisyada. xaddidaadda A of liability waa cap a on labada nooc ee magdhow laga heli karaa ama caddadka magdhow laga heli karaa. Khasaarooyin noqon kartaa si toos ah, in waxyeelo toos ah la barwaaqaysan ka anshaxa qandaraaslaha ee, ama waxa laga yaabaa inay aaya, in waxyeelo ay ahayd arrin in lacagta laakiin daruuri ma aha sabab toos ah Dhibaan.
In ixtiraam of macaamiisheena waxaan ku siin Hubinta Tayada adeegyada aannu taas oo macnaheedu yahay in, gudahood muddo go'an heshiis ku xusan qoraalka (sida caadiga ah 30 maalmood), haddii aadan ka dhergiyey adeegyadayada sabab kasta xaq, waxay doonaan in aan la eedeeyay. damaanad waa in go'an in heshiis la macaamiisha iyo waxay noqon doontaa mid gaar ah, isagoo sheegay in ka dib markii muddada 30 maalmood macmiilka leeyahay qanacsan shuruudaha qandaraas. Guarantee Money Back: Waxaan ka dhigi waxaa suurto gal ah inuu ku soo laabto qiimaha adeegyada qandaraas oo helay haddii aan gar qaybshay, sida ay caadi heshiis.
baahida Client aan la iska indho tiri karin! Waxaan fahmo baahiyaha iyo danaha macaamiisha our sidaa daraadeed waxaan isku dayaan in ay soo bandhigaan ka hor, ka hor inta baahiyahan dhalin kartaa dhibaato. shuqullada Our taageero 24/7, 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii via internetka iyo WhatsApp in ay saacadaha shaqada ka 8:00 a.m. – 6:00 p.m., Isniinta ilaa Jimcaha (Saturday hoos jadwalka).Waxaan rabnaa in aan AAD leeyihiin sida macaamiisha, haddii ay jiraan shaki ku saabsan yahay adeegga macaamiisha si xor ah, oo fiiriyaa noo! Waxaanu u balanqaadaynaa jawaabta!
Aparecida de kala xulka – GO, 74905-770.
Avenue Sao Paulo, hall 3 - Vila Brasilia, Aparecida de kala xulka - GO, 74905-770